Mabhuku aElvira Sastre, nhetembo nechishuwo uye nhoroondo nekunzwa | Zvazvino Zvinyorwa
Gore rino rapfuura, pawebhu pakave nekuwedzera mukutsvaga kwe "Elvira Sastre Libros". Uye izvi hazvishamise, nekuti uyu mukadzi mudiki wechiSpanish, anongova namakore makumi maviri nemapfumbamwe chete, mudetembi, munyori, philologist uye mushanduri. Akabudirira kuburitsa muunganidzwa wakasiyana wenhetembo uye akapihwa 29 Pfupi Raibhurari Mubairo mushure mekuburitsa bhuku rake rekutanga: Mazuva asina iwe (2019).
Sastre anoonekwa semumwe wevanyori vakakurumbira vechizvarwa chake, munyika nepasirese. Pakati pekuzivikanwa kwazvino, magazini Forbes (mune yayo 2019 edition) yaisanganisira iyo pakati pe "Iwo zana ekugadzira zvakanyanya", roster yakasarudzika ine matarenda anoshamisa epasirese chete.
1 Pfupiso yehupenyu hwaElvira Sastre
2 Mabhuku aElvira Sastre
2.1 Makumi mana nematatu nzira dzekuregedza bvudzi rako pasi (2012)
2.3 Mazuva asina iwe (2019)
2.4 Zvakaipa hazviitike kune imbwa dzakanaka (2019)
Pfupiso yehupenyu hwaElvira Sastre
Muzhizha ra1992, guta reSpanish reSegovia rakaona kuzvarwa kwaElvira Sastre Sanz. Kutenda kuna baba vake, hudiki hwake hwakapfuura pakati pemabhuku; akamukurudzira kuti ade kuverenga kubva pazera diki kwazvo. Muenzaniso weizvi ndewekuti aine makore gumi nemaviri chete akakwanisa kunyora yake yekutanga nhetembo. Zvitubu zvitatu gare gare, mukadzi mudiki akagadzira yake blog Relocos uye Ndangariro (ichiri kushanda).
Kuzivikanwa kwekutanga kwakawanikwa nekuda kwepeni yake yaive Emiliano Barral Nhetembo Mubairo, wakapihwa nyaya yake pfupi Miss. Makore gare gare, akaenda kuMadrid kunotora degree rake rekuyunivhesiti muChirungu Zvidzidzo. Mukufanana nebasa rake, hupenyu hwake semudetembi hwakatanga kuve nehukuru hukuru muguta guru reSpain. Izvi zvakamubvumidza kukwiza mapepa ane mukurumbira hunhu mumunda wetsamba, kutouya kuzogovana chikuva.
Muna 2013, Sastre akaburitsa rake rekutanga nhetembo, raakadana Makumi mana nematatu nzira dzekusunungura bvudzi rako. Mashoko okutanga ebasa akanyorwa nemunyori Benjamin Prado. Mwedzi yakati gare gare, muparidzi Valparaíso Ediciones akapihwa basa rekuparura muunganidzwa wake wechipiri wenhetembo, Bulwark (2014). Iri basa richiri rinoramba riri munzvimbo dzepamusoro dzemabhuku anotengesa zvakanyanya kudetemba muSpain, zvakare kugamuchirwa kukuru muLatin America.
Elvira Sastre's inotevera posvo yaive Hapana anotamba futi (2015), muunganidzwa wemabhuku ake maviri ekutanga pamwe nekubatanidzwa kweimwe nhetembo nyowani. Panguva iyoyo, akapedza kosi yakasarudzika muLiterary Shanduro (Complutense University yeMadrid), achizvisimbisa semuturikiri kuti aite zvinyorwa zvake zvekutanga mumunda. Mamwe emabhuku aakadudzira kusvika parinhasi ndeaya:
Vana vaBob Dylan (Gordon E. McNeer)
Nhetembo Dzerudo (Oscar Wilde)
Chibvumirano chisina musoro (John Corey Whaley)
Kudhinda kwake kwekunyora kwakaenderera mberi nezvikamu zviviri zvemadetembo: Kusurukirwa kwemuviri wajaira ronda (2015) uye Iwo mahombekombe edu (2018). Pamusoro pe, yakanyura mupepanhau Nyika, kuita kunyorwa kwevhiki nevhiki kwechinyorwa Madrid inondiuraya. Elvira akapokana semunyori wenhau na Mazuva asina iwe (2019), chinyorwa chakamuwanisa mutsauko: Pfupi Raibhurari Mubairo wegore rimwe chetero. Tevere, akaisa chikamu chake chazvino chakanangana nevana: Zvakaipa hazviitike kune imbwa dzakanaka (2019).
Makumi mana nematatu nzira dzekusunungura bvudzi rako (2012)
Ndiro bhuku rekutanga rakaburitswa naElvira Sastre, iro raanopinda naro munhetembo dzeSpanish dzanhasi. Basa racho rinoumbwa nhetembo makumi mana nematatu dzakatakurwa nemanzwiro akasiyana, idzo dzinogona kuzivikanwa nevazhinji. Izwi rega rega rinomiririra chiito cheushingi, rusununguko uye kusununguka mukutarisana nemanzwiro ekudzvinyirira uye kusagadzikana.
Makumi mana nematatu nzira ...
Elvira Sastre anopa rake repiri basa kuburikidza neunganidzwa uzere nhetembo nemhepo yekuvandudzwa, izvo zvinosiya chinyorwa chemunyori mumutsetse wega wega wakanyorwa. Nhetembo dzakaratidzwa dzinobata pamisoro yehupenyu hwezuva nezuva, senge: rudo, kuora mwoyo, mufaro, kusuruvara, hushamwari uye kunyangwe nyaya dzebonde.. Nyanduri anozviburitsa nehumwe hunyengeri kuburikidza nekushandisa mazwi matsva uye akareruka, asi azere nekusimudzira.
Bulwark Kwave kuri kubudirira kumunyori mudiki, izvi - muchidimbu - nekuda kwekuti imba yake yekutsikisa yakwanisa kuwedzera kune veruzhinji veLatin America. Mushure mekumisikidza pachayo pakati pechaunga chakakumbirwa kwazvo senhetembo munyika yekwake, basa rawana vateveri vazhinji munyika dzakaita seMexico uye Argentina.
Bulwark: Chinyorwa ...
Mazuva asina iwe (2019)
Nebasa rerudo iri, munyori akaita foray yakasimba mumhando yeruzivo; pakati pemitsara yaro inoratidza nyaya izere nemafungiro mazhinji nedzidziso. Zano racho rine vanhu vaviri vanonyanya kutaurwa: ambuya nemuzukuru wavo; vanorondedzera zvavanosangana nazvo murudo kubva mumaonero maviri akasiyana zvachose.
Iri zita rakagamuchira Sastre iyo 2019 Ipfupi Raibhurari Mubairo, chiitiko umo mapurofesa ane mukurumbira vakapinda mudare redzimhosva: Agustín Fernández-Mallo, Rosa Montero naLola Larumbe.
Mazuva asina iwe inorondedzera kushamwaridzana pakati paambuya (Dora) nemuzukuru wake Gael, muvezi wechidiki. Iyo zano rinopa zviitiko zviviri. Mukutanga, Dora - mudzidzisi panguva yeRepublic - anotaurira Gael nezverudo nyaya yake. Ichi chiitiko chakatakurwa neyakaomesesa ruzivo, kunyangwe ichiudzwa zviri pachena. Chembere iyi inopa murume mudiki zano rakakosha zvichibva pazviitiko zvake zvemakore mazhinji, asingazive nguva yakaoma yaaifamba nayo.
Mufananidzo wechipiri unotiratidza kuti Gael ari kutambura nekurambana kwazvino.. Nekudaro, rimwe nerimwe remashoko euchenjeri anobva kuna ambuya vake ari kumusiira dzidziso huru iyo inozomubatsira zvishoma nezvishoma kukurira mamiriro ake ezvinhu. Ndokukura kunoita rangano iyo vazhinji vanganzwe vachizivikanwa nayo, nemisoro yakadzika senge rudo nehupenyu.
Mazuva asina iwe: Mubairo ...
Zvakaipa hazviitike kune imbwa dzakanaka (2019)
Iyi nyaya inofamba ndeye Elvira Sastre yazvino chiverengero; basa racho raiperekedzwa zvinyoronyoro nemifananidzo yevana. Mubhuku, chinyoreso che Iye munyori mudiki anorondedzera chiitiko chakaratidza hudiki hwake uye kuti akasungirirwa kune anodiwa kwazvo munhu: imbwa. Mutsara wega wega mudetembo iri unobata pazvinhu zvakakosha zvakanyanya, senge mhuri uye kufa kwemudiwa.
Mumusoro, Munyori anounza maonero ake pane imwe yetaboos yenzanga: kutaura nezverufu kuvana. Panyaya iyi, mudetembi akati: "Hazvina musoro kudzivisa kutaura nezverufu, munguva pfupi inotevera unofanira kusangana naro."
Iyi nhoroondo inotaurira nyaya yembwa inonzi Tango. Mutambo unorondedzerwa zvakadzama nemusikana ane makore mashanu ekuberekwa, uyo anoona mhuka sechikamu chemhuri yake. Mumapeji ese ebhuku- uye pamwe nenguva yega yega kutaurwa- unogona kuona mifananidzo yezviitiko pakati pezviviri, kusanganisira nguva iyo imbwa inosiya ino nyika.
Iyi zvirokwazvo mamiriro akaoma kune chero munhu. Kunyange zvakadaro, iyo inotapira uye isina mhosva maonero emusikana mudiki anoita kuti zvese zviwedzere kugaya, nokudaro achisiya dzidziso huru pahuchenjeri hwehucheche.
Kwete imbwa dzakanaka ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Mabhuku aElvira Sastre
Akanakisa eSpanish nhoroondo mabhuku